UGwen Stefani Blake Shelton Ufuna ukwenza i-Wallpaper kwiZikhuselo zabo zeTabloid - Indlela Yokuphila
UGwen Stefani Blake Shelton Ufuna ukwenza i-Wallpaper kwiZikhuselo zabo zeTabloid
UGwen Stefani noBlake Shelton sesona sibini sithandekayo eHollywood (uxolo, andenzi mithetho), kunye nabezindaba uyazi yiyo. Abadibananga nje kuphela kukhuphiswano lwenyani lwe-NBC Ilizwi , Benzela ibali elihle, kodwa abayeki ukuthetha ngezabo ubudlelwane obumnandi -Ukubabeka kwiimagazini ezininzi kunye nezikhuselo zethebhu ezihambisa (kunye nokuqikelela) kuzo zonke iinkcukacha zobomi babo.
Kudliwanondlebe kunye Fikelela eHollywood , UStefani utyhile ukuba esi sibini sinokuba sisebenzisa ubuqhetseba kuninzi-njengabo, ezininzi many-tabloids they have graced the cover of ukusukela oko ulwalamano lwabo lwaqala.
Imvumi ethi 'Sweet Escape' ichithe elona lizwi litsha lokuba banamawele-bubuxoki, btw. Kuyabonakala ukuba, ibilixesha lesihlanu eli bali libonakala kumaqweqwe eetheyibhile, nangona kunjalo, esi sibini sibekwe kumaphepha angaphambili amaphephancwadi amaninzi kangangokuba bacinga ngeendlela abanokubabonisa ngazo 'njengobugcisa' ekhaya.
Yintoni iphepha lodonga likaGwen Stefani mhlawumbi ibonakala njenge.
Ukungena, Kulungile!, Ubomi kunye nesitayile, iiNkwenkwezi, kuthi ngeveki Le fan yeNtamo yasimahla ingaphantsi kwe- $ 20
Ngaba uBlake Shelton kunye noGwen Stefani batshata nini?
UBlake Shelton kunye no-Eva kaNyaka oMtsha kaGwen Stefani
UBlake Shelton uqaqambisa ikhonsathi yeDrive-in
Bukela uBlake Style Gwen kwimpahla yeeholide zeholide
Amahlaya kaBlake Shelton Malunga noMtshato kuGwen Stefani
UDuet omtsha kaBlake Shelton kunye noGwen Stefani balapha
isamente kumgangatho wendlu
Igumbi lokulala le-tv elinyusa izimvo
ngamaplanga axhonywe ngamagumbi okuhlala
ukugcinwa kwekhitshi elincinci